Dhalada Nalalka FARSAMADA
BOSTON Wareeg galaas Dhalo
Dhalada Kiniinka dhalaalaya
Dhalada muraayadaha SYRUP
XIRIIRKA MUUQAALKA CUNTADA
QALABKA Kaydinta JARKA
Clip Jar Jar
Dhalada Dhalada ah
Caano Wareeg ah
Dhalo Flint Vodka
Dhalo Khamri ah
Dhalada Nolosha & Quruxda
Dhalada Saabuunta Gacanta ah
Dhalo Buufiyo Glass
Dhalada Muraayada Dhalada
Dhalo Saliid Muhiim ah
Jar Glass kareem
Jar Glass Shumaca
Daboolka & Koofiyadaha
Mason Jar Ku marooji Cap
Af joogto ah
Dhalada caaga ah
SOO SAARAN SANDUUQ
Dhalooyinka dhalooyinka ah iyo dhalooyinka loogu talagalay kombucha
Waa maxay Kombucha? Kombucha waa cabitaan shaah khamiir leh. Waxay guud ahaan u isticmaashaa shaaha madow ama shaaha cagaaran alaabada ceeriin. Waxay ka kooban tahay noocyo kala duwan oo khamiir iyo bakteeriyo ah, iyo sidoo kale asiidhyada dabiiciga ah ...
Aynu wax badan ka ogaanno weelka baakadaha dhalada ah.
Dhalooyinka dhalada waa dhalooyin ka samaysan alaabta ceeriin ee dhalada ah. Waxaa jira midabbo badan oo dhalooyinka quraaradaha ah, oo ay ku jiraan dhalooyinka dhalada ah, dhalooyinka dhalooyinka cagaaran, dhalooyinka dhalada ah ee buniga ah, dhalooyinka buluugga ah ee buluugga ah, dhalooyinka galaaska cagaaran ee madow. Waqtigan xaadirka ah, dhalooyinka quraaradaha cad oo hufan ayaa ...
Codsiga Muraayadaha la Isticmaalay ee Dhalada Dhalada / Soosaarka Dhalada ah
---------------------- Dhalooyinka quraaradaha la isticmaalay - QIIMAYNTA dib u warshadeynta Maxaa muraayada la isticmaalay? Muraayadaha la isticmaalay waxaa loo gudbiyaa baakadaha dhalada ah ee aan la isticmaali karin, qalabka dhismaha ee la tuuray iyo galaaska maalinlaha ah ....
Bandhigga Doomaha Dragon-ka Shiinaha!
Bandhigga Doomaha 'Dragon Boat Festival' wuxuu ka yimid Shiinaha. Waxay ahayd asal ahaan xaflad halkaas oo awoowayaashii hore lagu caabudi jiray qaab tartan masduulaagii masduulaagii ahaa. Qu Yuan, oo ah gabyaa Chu intii lagu jiray Muddadii Dagaallada ee Gobollada, ayaa isdilay isagoo dhagaxaya kuna boodaya Mi ...
Noocyo kala duwan daboolida weelka birta ah
Waxaa qoray admin on 21-06-02
Afka Joogtada ah ee Afka Mason-ka ah ee Lagu Daro Daboolka Waxyaabaha La-waarayo ee Cawska: Oo ka samaysan stinplate, dib loo isticmaali karo oo raagaya, caddayn miridh ah iyo dheecaan-caddeyn, saxanka dhaqe leh
Tiknoolajiyada farsamaynta ee dhalooyinka quraaradaha ah
Falanqaynta dheeriga ah ee dhalooyinka dhalada waxay inta badan ku saleysan tahay shuruudaha naqshadeynta macaamiisha iyo isticmaalka deegaanka, si loo fuliyo shaqada qurxinta la bartilmaameedsaday.Waxaa jira habab badan oo loo adeegsado qurxinta qurxinta, iyo xulashada hababka wax lagu farsameeyo ayaa ku tiirsan ...
Maxaad u baahan tahay si aad DIY ugu sameysid kafee kafee gurigaaga?
Qaxwaha diyaargarowga qabow wuxuu adduunka ku qaadanayaa duufaan. Waxaa laga yaabaa inaad dareentay in kafeega lagu kariyo qabow xoogaa ka qaalisan dukaamada qaxwada badan. Ma isweydiisay sababta? Xaqiiqdii, waxa ka dhigaya qaxwada qaxwada ee qaaliga ah qaali waa waqtiga la gelinayo sameynta. Caadi ahaan, ...
Noocyada Kala Duwan ee Warshadaha Dhalooyinka Dhalada ah
Taariikhda horumarka ee dhalooyinka quraaradaha Waxaa Shiinaha ka jiray dhalooyin quraarad ah ilaa waqtiyadii hore. In pa ah ...
Dhalooyinka quraaradaha kala duwan
Taariikhda horumarka ee dhalooyinka keydinta cuntada Maaddaama ay cunto jirto, waxaa jiray xirmooyin, laakiin baakadaha cuntada ee dhabta ah waa inay ka bilaabmaan keydinta cuntada ee ku jirta gasacadaha. Warshadaha qasacadeynta cunnadu waxay ka unkameen 1804. Nicolas Appert oo reer France ah ayaa si guul leh u horumariyay gl ...
Sidee loo Xidhaa Dhaladaada Dhalada ah?
Ma jeceshahay inaad isticmaasho dhaladaada dhalada ah laakiin ma garatid sida loo xirxiro? Maanta, waxaan soo bandhigi doonnaa hab hagaagsan oo lagu xiro dhalooyinkaaga dhalada ah! Maxaan u baahan nahay? 1. Qalab Gacmeeyaha gacanta lagu qaadan karo ee la qaadan karo ...
Festival siraad Spring
Feynuuska siraad waa mid ka mid ah ciidaha dhaqameed ee Shiinaha. Waa maalinta 15aad ee bisha koowaad ee dayaxa, oo ku beegan Iiddii Guga. Feynuuskii siraad waa qayb ka mid ah Guga Festival si dhab ah. Dayaxa ayaa marka hore buuxa sanadka cusub. Feynuuskii Fayd ...
Farxad Sannadka Cusub ee Shiinaha !!!
Guul iyo farxad sanadka cusub ee soo socda! Sannad Cusub oo Barakaysan 2021! Bandhigga Gu'ga, oo ah, Sannadka Cusub ee Lunar, waxaa badanaa loo yaqaan Sannadka Cusub, Sannadka Cusub, iyo Sannadka Cusub. Waxaa sidoo kale af ahaan loo yaqaan ...
Miyaad jeceshahay inaad ku cabto qasacadaha shaaha ee loo yaqaan 'BOBA Glass Glass'?
Shaaha xumbo (sidoo kale loo yaqaan shaaha caanaha luul, shaaha caanaha xumbo, ama boba; Shiine: 珍珠 奶茶; pinyin: zhēn zhū nǎi chá, 波霸 奶茶; bō bà nǎi chá; or 泡泡 茶; pào pào chá in Singapore) waa a cabitaan shaah ku saleysan Asal ahaan Taichung, Taiwan horaantii 1980, waxaa ku jira c ...
Sidee loo doortaa Bixiyaha Baakadaha Saxda ah ee Saxda ah?
Sida Loo Doorto Saxeexa Dhalada Saxda ah Markay suuqa keenayso alaabada dhalada ku jirta, nooca dhalada aad doorato iyo dhalada alaab-qeybiyaha ee aad la shaqeysid ayaa saameyn weyn ku yeelan kara macaashkaaga. Fadlan si taxaddar leh u akhri shuruudahaaga iyo tilmaamahaaga ...
Waa maxay faa'iidada dhalooyinka quraaradaha?
Qalabka baakadaha dhalada iyo konteenarradu waxay leeyihiin faa iidooyin badan: 1. Waxyaabaha muraayadda ahi waxay leeyihiin astaamo caqabad wanaagsan, oo ka hortagi kara ogsijiinka iyo gaasaska kale inay weeraraan waxyaabaha ku jira, isla mar ahaantaana looga hortago qaybaha is-bedbeddelaya ee ka kooban waxyaalahaas.
Maxaa loo ruxaa dhalada sare? Xulashada ugu fiican cabitaankaaga!
Dhalada ugu sareysa ee lulashada ayaa magaceeda la yidhaa waxay ku timaaddaa dabool biraha / daboolka dusha sare leh. Daboolladani waxay leeyihiin shaqooyin hawo-qaadasho oo aad u fiican waxayna ku habboon yihiin kaydinta casiirka gacanta lagu riixo, th ...
Baakadaha qurxinta ee saxda ah, dhalo aad u qurux badan!
Maxaa loo qurxiyo dhalooyinka quraaradaha? Baakadaha dhalooyinka qurxinta qurxinta ma aha oo kaliya maxaa yeelay dhalooyinka qurxinta qurxinta waxay keeni karaan saameyn muuqaal oo wanaagsan, laakiin sidoo kale xirnaantooda wanaagsan iyo xasilloonida kiimikada ayaa fure u ah hubinta tayada qurxinta. In ...
Mason Jar Miyaa Ku Gali Kara Microwave? Ma ka ogtahay arrintaas
Jawaab Deg Deg ah: Marka xawaaraha nolosha si dhakhso ah u socdo, kuleylka cuntada foornada microwave ayaa noqota mid caan ah. Si kastaba ha noqotee, inbadan oo naga mid ah ma cada inay jiraan shuruudo gaar ah oo ku saabsan weelasha lagu ridi karo foornada microwave, si loo ilaaliyo safkeena shaqsiga ah ...
Immisa hawlood ayey leedahay dhaladaada buufintaadu?
Marabtaa inaad ogaato sida aad u isticmaali karto dhaladaada buufinta sunta ah? jawaabtu waa, maalin kasta iyo shir kasta! Hel dhalo buufin ah, ku raaxee nolol fudud! 1. Dadka ka shaqeeya xafiiska, hawo qaboojinta awgeed, hawadu aad ayey u qalalan tahay, moi ...
Maxaad ugu baahan tahay duub dhalada saliida lagama maarmaanka ah?
10 ml Cobalt Blue Glass Roll on Dhalooyinka, Dhalooyinka Muhiimka ah ee Rullaluistemadka leh Ballaarooyinka birta ee birta ahaanta ah ★ Tayada Sare: Dhalooyinkaasi waa m ...
Sidee buu ushaqeeyaa Mashiinka Xumboobida? Saabuun xumbo qaybiyaha!
Jeclaanshaha dhalada bamka xumbaysa？ Laakiin miyaad garanaysaa sida mashiinku u shaqeeyo? Aynu wax badan ka baranno！ Mabda'a shaambooga ka soo saara dhalada: adoo isticmaalaya cadaadiska Hawada. Markaad isticmaaleyso, marka hore riix si aad ...
Dhalada Saliida Saliidda Saytuunka ah 17 Oz Qamrigan Bixinta Khariidadda Muraayadda Jikada
Sharaxaadda alaabta Si aad saliid iyo khal ugu hayso gacanta si sahlan oo loo helo. Inaad xakamayso daadintaada oo aad ka ilaaliso daadashada iyo daadashada. Si aad sifiican ugu ilaaliso saliidaada iyo khalkaaga dhalada dhalada ah ee aaminka ah, ka ilaali boodhka oo halaaga ...
Dhalo Super Flint Glass Liquor oo loogu talagalay Vodka aad ugu jeceshahay!
Ku raaxayso vodkaaga, khamriga, ruuxa? Halkan ka hel dhalo dhalo ah oo aad u weyn！ Cabbir: 100ml, 500ml, 750ml la heli karo. TAYO SARE - Dhalooyinkaan waxaa laga sameeyay muraayad tayo sare leh oo raashin leh oo aad u adkeysi badan PERFECT ...
Dhalo Biyo Cagaaran oo Loo Isticmaali Karo Casiirka, Kombucha, Cabitaanada Guryaha Lagu Sameeyo
Jarida Cabitaanka Safarka ah ee Dib Loo Isticmaali Karo oo leh Dabool Hawada Caaga ah, Dhalada Biyaha Biyaha ah ee loogu talagalay Casiirka, Khudradaha, Kombucha, Shaaha, Dhalooyinka Caanaha, Cabitaanka Guryaha Lagu Sameeyo Dhalo Qurux badan, Dhalooyinka Casriga ah ee Casriga ah - Dhalooyinkaas dhalada ah ee ah 16-wiqiyadood ayaa ah wax weyn, xiiso leh, ...
Dhalooyinka Qurxinta Qurxoon! Arooska DIY Honey Jelly wuxuu door bidaa Maydhashada Ilmaha!
QALABKA SHAQAALAHA SARE EE AAD UGU HOOSAN EE LAGU LEEYAHAY LIDHADA DAHABKA AH: Qalabka dhalada ah ee Hexagon Glass iyo Daboolka Dahabka ee leh Plastisol Liner. 1.5oz (45ml). 1.75 "(W) x 2" (H). Furitaanka: 1.25 ”BPA BILAASH AH & CUNTO SAFE & VINEGAR-PROOF: BPA Bilaash 100% ...
Iibinta Xaraashka ah ee Sii-iibinta-Leakhka Caddaynta Rubber-ka iyo Daboolka Xiran ee Guriga iyo Jikada!
Weelasha Dhalooyinka Yar Yar oo Leh Daboolida Xisbiyada! Dhalooyinka dhalooyinka sare leh waxay leeyihiin dabool si gaar ah loogu tala galay oo isku haysa kaas oo ay ku jiraan goomayaal caag ah si loo hubiyo inay soo daadaneyso cadayn iyo shaabad hawo la'aan ah. Dhalooyinkaas 3oz dhalooyinka waa 3 "dherer iyo 2" ballaaran ...
Sida loo hagaajiyo lifaaqa dhalada ee soosaarayaasha dhalada galaaska
Isbeddelada heerkulka daran awgood, muraayadda aasaaska ee annealedka ku jirta waxay ku jirtaa geedi-socodka sameynta. Lakabyada gudaha iyo dibaddaba waxay soo saaraan kala qaadis heerkul ah, oo ay ugu wacan tahay kala duwanaanshaha qaabka, dhumucda, iyo heerka qaboojinta alaabta la dhammeeyay, ...
U hel dabool qurux badan oo caag ah shaahaaga xunbada leh!
Ku raaxayso shaahaaga xumbo DIY ah, laga bilaabo hadda! Waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad sameyso: 1. soo qaado weelka aad jeceshahay ee masoniga ah, oo ka sii fiican inaad la socoto awood ballaaran si aad ugu raaxeysato jidka oo dhan adigoon si joogto ah u buuxin! 2. Dabool balaastig ah oo si fudud loo isticmaali karo, oo ku habboon dhammaan cabirrada cawska, oo leh god weyn oo f ...
Sida loo isticmaalo saliidaha lama huraanka ah iyo talooyinka
1.Quruxso oo qurxi maqaarkaaga (saliida muhiimka ah galiya weelka ay ka buuxaan biyo diirran oo u dhigma 500: 3 oo wajigaaga uumi joog dhererkiisu yahay 500px biyaha, ama si toos ah dhirbaaxada biyaha wejigaaga dhowr jeer oo xiriir ah) ...
Waxyaabaha kulul ee soo socda! Noocyada kala-baxa ee Mason Canning Jar Jar!
Waxyaabaha kulul ee xilligan! Af joogto ah & Af ballaadhan 2 gabal / dabool weel bir ah oo qaab kala qaybsan leh! Waxyaabaha lagu kalsoonaan karo: daboolka qasacadaha iyo ganaaxyada waxaa laga sameeyaa maadada qasacadaysan, taas oo waari karta oo aan sahlaneyn in miridhku dhaco, ammaan ...
Cinwaanka:Dabaqa 8aad, Xafiiska Lanhai D Bldg, Xarunta Ganacsiga Lvdi, Degmada Yunlong, Xuzhou, Jiangsu, Shiinaha